Farmaajo maka qeybgalayaa saxiixa heshiiska doorashadda? | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo maka qeybgalayaa saxiixa heshiiska doorashadda?
Munaasabadda ayaa la filayaa inay kasoo qeybgalayaan dhamaan dhinacyad siyaasadda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa ka socota Teendhada Afisyooni munaasabad lagu saxiixayo heshisika doorashadda ay wada gaareen Rooble iyo Madaxda Maamullada dalka.
Waxaa lagu diyaariyay Teenadhada kuraasta Madaxda sare ee ka qeybgalaysa, waxaana ku jira kursi ay ku qoran tahay Farmaajo, taasoo ka dhigan inuu kasoo qeybgalaya xafladda.
Madaxdii hore sida Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo Musharixiinta ayaa sidoo kale ku casuuman, iyagoo jeedin doono khudbado, waxaana sidoo kale ka qeybgalaya wakiiladda Beesha Caalamka u fadhiya Muqdisho.
Heshiiskan cusub waxaa durba diiday Cabdi Xaashi, gudoomiyaha Aqalka Sare oo dhaliilsan hanaanka loo qeybiyay xubnaha gudiyadda doorashadda, oo awoodda soo magacaabistooda la siiyay ku xigeenka Ra'iisul Wasaaraha Mhadi Guuleed.